जोशमा होस गुमाउदै कलाकार, कला होइन, अंग देखाउदै युवा भड्काउदै – यो के गरिन् सरस्वतीले बाह्रकुने मेलामा – हेर्नुहोस् भिडियो !
उडि जाने हावाले…गित गायर गायिका बनेकी सोलुखुम्बुकि सरस्वती लामा हट कलाकारको लिस्टमा पर्छिन । उसो त उनि गीत लेख्ने देखि संगीत भर्ने र भिडियोमा निर्देशन समेत गर्छिन । गित गाउने मात्र होइन मोडलिङ पनि गर्छिन तर उनीसंग भएको कलाकारिताले भन्दा उनको नग्न भल्गर प्रदर्शनले सांगीतिक क्षेत्रमा उनलाई चिनाएको छ ।
कला र क्षमताले कलाकार बनेका नेपाली कलाकारहरु सिमित छन् । असभ्यता प्रदर्शन गरेर कलाकारितामा चर्चा कमाएका थुप्रै कलाकारहरु भेटिन थालेका छन् ।
यस्तै चर्चा कमाउने मध्यकी कलाकार हुन् सरस्वती लामा । सभ्यता र संस्कारको कसिले अल्झिएको भनिएको हाम्रो समाज भित्र यिनै अनुहारहरुको उछ्रिंकल प्रस्तुतिले हरेकका चेतहरु भंग गर्दै जबर्जस्ती आकर्षणको फराकिलो बजार निर्माण भैरहेको छ ।
त्यसैले त यस्तै भल्गर प्रस्तुतिमा रमाउछन दर्शकहरु पनि ! सायद यो युगको माग हो ।
क्षेत्र र समुदाय बिशेषमा धुमधामका साथ् मनाइने माघेसंक्रान्तिमा यसपाली यिनै अर्धनग्न कलाकारहरुको उपद्रो देख्न पाइएको छ । दाङको बाह्रकुनेमा हिजो मनाइएको माघेसंक्रान्ति मेला आज देश बिदेशमा चर्चाको बिषय बनेको छ ।
बाह्रकुने दहको मेलामा चन्दा दाहाल र सरस्वती लामाको प्रस्तुतिले हरेक नेपालीहरुको ध्यान खिचेको छ ।
हेर्नुहोस कलाकार सरस्वती लामाको भल्गर प्रस्तुति (भिडियो):
प्रदिपले सुमीलाई सोधे ‘खै त तिम्रो बुट्टे सारी’ ? (भिडियो)